Eyigharịla ekpere gị: usoro ise iji bido ma ọ bụ bido
Onweghi onye nwere ndụ ekpere zuru oke. Ma ịmalite ma ọ bụ ịmalitegharị ndụ ekpere gị bụ ihe a na-achọsi ike mgbe ị tụlere etu o siri chọsie ike isoro Chineke nwe mmekọrịta ịhụnanya. Dika otutu ihe omume, dika omumu omumu, odi nma inye aka na ikpe ekpere. Ọ na-enye aka isetịpụ ụfọdụ ebumnuche ekpere maka ijikọ Chineke nke ị ga-enweta.
Stepszọ ise iji bido - ma ọ bụ bido n'isi - n’ekpere:
Kpebie ebe na mgbe ị ga-ekpe ekpere. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ikpe ekpere ebe ọ bụla na oge ọ bụla, ọ kacha mma ịhazi oge na ebe a ga-ekpe ekpere. Malite na nkeji ise ma obu iri n’ime Chineke - ya na Chineke nan i - dika oge isi ekpere gi. Họrọ ebe dị jụụ ebe naanị gị nwere ike ịnọ na-enweghị ike ịkwụsị ya. Chee echiche banyere oge ekpere a dika isi oriri gi na Chineke, n’eziokwu, inwere ike rie nri nke onwe ma obu nri ntanu n’ime ubochi ma obu izu uka, ma nri nke ekpere gi bu nke i debere.
Na-eche ka ekpere zuru ike ma dị njikere. Dị nnọọ ka ị na-a toa ntị n'ọdịdị gị n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ ma ọ bụ mgbe ị na-achọ itinye ego maka ụlọ akụ, mgbe ụfọdụ anyị na-echefu ime ya mgbe anyị na-ekpe ekpere. Kwe ka ahụ gị bụrụ enyi gị n’ekpere. Gbalịa otu n'ime ndị a: Nọdụ ala na azụ kwụ ọtọ na ụkwụ gị n'ala. Tinye aka gị n’apata ụkwụ gị ma ọ bụ tinye aka gị n’apata gị. Ma obu inwere ike igbali n’elu akwa ma obu gbue ikpere n’ala.
Wepụta oge jiri nwayọ nwayọ ma wetuo obi maka nkwadebe maka ekpere. Mee ka uche gị dị ọcha n’ihe niile ị na-eme n’oge. Ọ dịghị mfe ịme, mana na omume ị ga-akawanye mma. Otu ụzọ isi mee nke a bụ iji iku ume 10 ma ọ bụ karịa. Ihe mgbaru ọsọ gị abụghị ịbụ onye na-enweghị uche, kama iwelata ihe ndọpụ uche nke ọtụtụ echiche.
Na-ekpe ekpere ụma. Gwa Chineke na I bu n’obi iji nkeji ise ma ọ bụ iri na-esote gị na ọbụbụenyi gị. Hụ Chineke n’anya, nkeji ise na-abịa abịa bụ nke gị. Achọrọ m ịnọnyere gị ma enwere m obi iru ala ma dịkwa mfe ndọpụ uche. Nyere m aka ikpe ekpere. Ka oge na-aga, ị nwere ike nwekwuo agụụ ịmụba oge ekpere gị, ị ga-ahụ na ka ị na-ebute ya ụzọ na ndụ gị, ị ga-ewepụta oge maka ogologo oge ekpere.
Kpee uzo obula ichoro. I nwere ike na-ekpeghachi ekpere gị ugboro ugboro wee nụ ụtọ oge udo gị na Chineke ma ọ bụ ịnwere ike ikpe ekpere gbasara ọdịnaya ụbọchị gị na atụmatụ ị ga-enwe maka echi Nwere ike igosipụta obi ekele, ịrịọ mgbaghara, ma ọ bụ chọọ enyemaka Chineke na nsogbu ma ọ bụ mmekọrịta siri ike. I nwere ike ịhọrọ otu ekpere i bu n’obi, dị ka Ekpere Onyenwe Anyị ma ọ bụ Abụ Ọma nke iri abụọ na atọ. You nwere ike ikpe ekpere maka onye ọzọ maọbụ naanị gị na Chineke nọrọ n'ịhụnanya efu. Tụkwasị obi na Mmụọ nke Chineke nọnyeere gị ma nyere gị aka ikpe ekpere n'ụzọ ga-adịrị gị na Nna mma. Jide n'aka na ị na-ewepụta oge iji gee ntị n'akụkụ Chineke nke mkparịta ụka ahụ.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis nyere nkpuru obi maka ndị bishọp Kadịnal 169 nwụrụ anwụ
Next Post → Post ozo:Ozioma nke taa dị ka Nọvemba 8, 2020 na okwu Pope Francis